vaovao... sy vaovao...
2008-06-02 @ 20:17 in Ankapobeny
Misy karazam-baovao tsy aritra moa ireto ka dia ampitaina aminareo ihany sao manko mbola tsy nisy ny nampita izany. Toa an'i New2dago kely indray aho aloha mandra-paha, eny fa na dia maro tamin'izay nosoratany aza no fikiriny avy amin'ny haino aman-jery kokoa.
Ny vaovao miverimberina indrindra amin'ny fampahalalam-baovao tazonin'ny fanjakana aloha amin'izao fotoana izao dia mampahatsiahy ny tamin'ny andron'ny revolisiona ary mitady haka tahaka ny ataon'ny Koreana tavatra mandraka androany. Ny lazana voalohany indrindra manko dia ny akon'ny dian'ny filoham-pirenena tany Japana. Mbola vaovao be io na dia toa heno sahady aza fa lasa any Zurich indray ny lehilahy. Tahaka ireny hoe tsy hahita tany intsony ireny ny lehilehy raha vao tsy mitondra firenena eo.
Manaraka sy mitohy amin'izany ihany dia mbola misy tohiny ihany koa ilay fampiofanana momba ny fahaiza-mitarika narahin'ny Ben'ny tanàna tany Iavoloha nandritra ny roa andro iry. Ny mpampiofana indray no mandeha isaky ny distrika, miara-miofana amin'ny Ben'ny tanàna amin'izany ihany koa ny mpitantsoratra isaky ny Kaominina sy ny lehiben'ny distrika. Na dia tokony ho zavatra iray ihany ary no lazaina ka hoe roa andro ny fiofanana momba ny fahaiza-mitarika sy ny fahaiza-mitantana dia tsy maintsy mitady zavatra lazaina ny isaky ny distrika andalovan'ny fiofanana. Vokatr'izany, tsy misy zavatra azo sintonina loatra tamin'ny vaovaon'ny rnm androany alatsinainy atoandro nandritra ny atsasak'adiny. Azo nafohezina ho filazana telo miniotra ihany anefa io miaraka amin'ny fanononana ny distrika nandalovana dia ampy raha tsy maintsy nolazaina ilay vaovao (noho ny volabe laniana aminy?).
Vaovao fohy indrindra nefa nanintona tanatin'izany ampitampitao "naverina manontolo" izany ny filazan'ny rnm fa nitokona ny mpanadina BEPC taranja fanatanjahantena tao Antananarivo Avaradrano izay tokony hifarana amin'ny alarobia ho avy izao. Ny anton'ny fitokonana dia fitakiana ny "vacation" ny fitsarana BEPC tamin'ny taona 2007, efa herintaona izay. Hay ve miteny izany ihany ny rnm, hoy aho, nefa tsy reko tamin'ny fampahalalam-baovao hafa io tamin'io atoandro io.
Vaovao hafa indray dia malaza any amin'ny faritra sasany any fa ny fanalavana ny BAREA dia hoe Bandin'i (na Baolin') Antananarivo REnivohitra sy Antsirabe, ny antony dia noho ny ekipa mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny baolina fandaka izay avy amin'ny ligin'Analamanga avokoa ary miampy iray izay Akademia Ny Antsika (Antsirabe). Tsy ity akory ilay zavatra mahasosotra na mandrangitra efa nampiomanako ny mpamaky ny bolongana fa ho avy miadana eo ihany izy.